ဗုဒ္ဓသာသနရံသီ (ဂျာမနီ) အသင်း: September 2011
သူငယ်ချင်း (ဦးဇော်မြင့်) အတွက် အမျှကုသိုလ်
၂၀. ၀၈. ၂၀၁၁ ရက်နေ့က ဦးဇော်မြင့် အသက် (၄၉) နှစ်ဟာ Mannheim hospital မှာ ဆုံးပါးသွား ခဲ့ပါတယ်။ သူဆုံးပါးသွားခဲ့တာကို သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများ တစ်ယောက်မျှ မသိရှိခဲ့ကြပါ။ သူဆေးရုံ တက်နေစဉ် တစ်ပတ်တစ်ခါ တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ဦးမော်ဟိန်းနဲ့ ဖုန်းအဆက်အသွယ်တော့ ရှိခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း ဦးဇော်မြင့်ထံမှ ဖုန်းအဆက်အသွယ်မရတာနဲ့ အခြေအနေကို သိရအောင် သူ့ရဲ့ ရှေ့နေထံ ဖုန်းဆက်ပြီး စုံစမ်းကြည့်တော့မှ သြဂုတ်လ ၂၀ ရက်နေ့က ဆုံးသွားခဲ့ကြောင်း သိရှိခဲ့ရပါတယ်။ ဆုံးပါးသွားခဲ့တဲ့ ဦးဇော်မြင့် အတွက် ရည်စူးလျှက် ရောက်ရာဘ၀မှ သာဓုအနုမော်ဒနာ ခေါ်ဆိုနိုင်ရန် သူငယ်ချင်းများ ဖြစ်ကြတဲ့ ဦးမော်ဟိန်း၊ ဦးခင်မောင်စိုးတို့မှ ၂၀. ၀၉. ၂၀၁၁ ရက်နေ့တွင် တစ်လပြည့် ကုသိုလ်အဖြစ် ဆွမ်းခဲဖွယ် ဘောဇဉ်များနှင့် သင်္ကန်းပရိက္ခရာတို့ကို ဆက်ကပ်လှူဒါန်းကြပြီး ပရိတ် တရားတော်များ နာယူကြကာ ရေစက်သွန်းချ အမျှပေးဝေခဲ့ကြပါတယ်။
မြူးချမ်းမြို့ ဘာသာပေါင်းစုံ ဆွေးနွေးပွဲ
ဂျာမဏီနိုင်ငံ၊ မြူးချမ်းမြို့မှာ Bound to live together religions and cultures in dialogue အခမ်းအနားကို ၁၁. ၀၉. ၂၀၁၁ ရက်နေ့မှ ၁၃. ၀၉. ၂၀၁၁ ရက်နေ့အထိ သုံးရက်တိုင်တိုင် စည်ကား သိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီအခမ်းအနားသို့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ လန်ဒန်မြို့၊ သာသနရံသီ ဆရာတော်၊ ဂျာမဏီနိုင်ငံ၊ ဖရန့်ဖို့မြို့၊ ဗုဒ္ဓသာသနရံသီမှ တာဝန်ခံဆရာတော် အသင်း၏အတွင်းရေးမှူးနှင့် ကော်မတီဝင်တို့လည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှ သံဃရာဇာဆရာတော်၊ စင်္ကာပူနိုင်ငံမှ သီရိလင်္ကာဆရာတော်တို့လည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ နိုင်ငံပေါင်း တစ်ရာကျော်မှ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် ပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော်ကို ဖိတ်ကြားခဲ့ပြီး အစည်းဝေးပွဲမှာ လူဦးရေ တစ်သောင်းကျော် တက်ရောက်ခဲ့ ကြပါတယ်။ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များတွင် ထေရ၀ါဒ ရဟန်းတော်များ၊ ဂျပန်မဟာယာန ရဟန်းတော်များ၊ ခရစ်ယာန် ဂိုဏ်းချုပ် ဘုန်းကြီးများ၊ မွတ်ဆလင် ဓမ္မဆရာများ၊ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်များ၊ ဂျူးဘုန်းတော်ကြီးများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ အခမ်းနား ဖွင့်ပွဲနေ့တွင် ဂျာမဏီနိုင်ငံ သမ္မတနှင့် ၀န်ကြီးချုပ်တို့လည်း တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အခမ်းအနား တက်ရောက်လာကြသူများ နားလည်နိုင်ရန် အီတလီ၊ ပြင်သစ်၊ အင်္ဂလိပ်၊ ဂျာမန်၊ တရုတ်၊ ဂျပန်၊ အာရဘီ ဘာသာ စကား (၇) မျိုးတို့ဖြင့် တိုက်ရိုက် ဘာသာပြန်ပေးထားပါတယ်။
ဒီအခမ်းအနားကို ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီးများမှ ကြီးမှူးကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်၊ ဥရောပနိုင်ငံများအတွင်း တစ်နှစ်လျှင် တစ်နိုင်ငံ ကျင်းပလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီနှစ်ဟာ ဂျာမဏီနိုင်ငံမှာ ကျင်းပခွင့်ရတဲ့ နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံအသီးသီးမှ ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၊ တက္ကသိုလ် အသီးသီးမှ ပါမောက္ခများ အားလုံးကုို ဧဒင်ဟိုတယ်၊ ဖိုက်စတားဟိုတယ် စတဲ့ နာမည်ကြီး ဟိုတယ်များမှာ တည်းခိုရန် စီစဉ်ပေးထား ပါတယ်။ နေ့စဉ် ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဧည့်ပရိသတ် အားလုံးတို့အား ဖိုက်စတားဟိုတယ်မှာ တည်ခင်းဧည့်ခံ ကျွေးမွေးပါတယ်။
ဗုဒ္ဓသာသနရံသီ အသင်းကြီး၏ ၂၀၁၂ - ခုနှစ် အလှူရှင်များ
၅၀ ၅၀ ၅၀
၂၀ ၂၀ ၂၀ ၂၀ ၂၀
ဦးတိုးအောင်ထွန်း ဒေါ်အေးအေးကြည်ု
၁၀ ၁၀ ၁၀ ၁၀ ၁၀
၃၀ ၃၀ ၃၀
Dimitrios Mito မတင်မိုးဆက်
၅၀ ၅၀ ၅၀ ၅၀ ၅၀ ၅၀
၂၅ ၂၅ ၂၅ ၂၅
၂၀ ၂၀ ၂၀
ဇန်န၀ါရီလမှ ဒီဇင်ဘာလအထိ တစ်လလျှင် ၁၀ နှုန်းဖြင့် ၁၂၀ လှူဒါန်းပါသည်။
၅ ၅ ၅ ၅
၃၀ ၃၀ ၃၀ ၃၀ ၃၀
ဗုဒ္ဓသာသနရံသီ အသင်းတိုက် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း စာအုပ်စင် (၃) စင်အတွက် လှူဒါန်းပါသည်။
Basmati rice တစ်အိတ် (4. 1. 2012) ရက်နေ့တွင် လှူဒါန်းပါသည်။
၂၀ ၂၀ ၂၀ ၂၀
၁၀ ၁၀ ၁၀
ကိုနိုင်ဝင်းဦး နှင့် ဇနီး မိသားစု
ကိုကျော်ခိုင် မမြ၀တ်ရည် မိသားစု
ဦးတင်ဖေ ဒေါ်အုန်းမမ မိသားစု
ဦးကျော်ကျော် + ဒေါက်တာ ဒေါ်သင်းသင်းဦး (သား) မောင်ဇေယျာမိုး မိသားစု (7 >12) ထိ
ကိုနိုင်ဝင်းအောင် + မခင်စန္ဒာထွန်း
၂၅၅ ယူရိုနှင့် မိတ္တူပရင်တာ စက်ကြီးတစ်လုံး လှူဒါန်း
ကိုဇော်မိုးဦးနှင့်ဇနီး Dai (USA)၊မအေးနန္ဒာတင်ဖေ (USA)